Jinsi ma jiri karaa haddii uusan jirin wax gelitaan? | Bezzia
Jinsi ma jiri karaa haddii uusan jirin wax gelitaan?
Maria Jose Roldan | 08/04/2021 04:59 | Galmo
Ilaa maantadan la joogo, caqiidada caanka ah ayaa weli ku guuleysata in haddii uusan jirin wax galitaan, uusan jirin galmo. Waa muhiim in fikradahaas la iska dhaafo oo loo maleeyo inay galmo jirto marka ay jirto salaaxid, siigaysi ama galmo afka ah oo u dhexeeya labada qof.
Waa inaad leedahay maskax furfuran oo badan oo iska ilooba xaqiiqda ah inay jirto galmo keliya haddii ninku awood u leeyahay inuu dhex galo naagta inta lagu guda jiro galmada. Qodobka soo socda waxaan ku siineynaa furayaal si aan u hubino in galmo jiri karto inkastoo aysan jirin wax gelitaan.
1 Jinsi ayaa jiri kara haddii uusan jirin wax gelitaan
2 Kakanaanta galmada
3 Dib-u-barashada galmada
Jinsi ayaa jiri kara haddii uusan jirin wax gelitaan
Nasiib wanaag waxaa jira dad aad u tiro badan oo miyir qaba oo u maleynaya inay galmo noqon karto inkasta oo gelitaanka nin uusan dhicin. Fikirkan ayaa aad ugu badan dumarka marka loo eego ragga. Qofku wuxuu ku raaxeysan karaa nolol galmo oo firfircoon in kasta oo maqnaanshaha nooc ka mid ah galka.
Aqoonta galmada ee liidata ee la helay waxay ka dhigeysaa dad aad u tiro badan, guska guska siilka wuxuu dareemayaa wax la qasbay si loogu tixgeliyo galmo. Waxbarashadani waxay siisaa doorbid ka weyn raaxada ragga marka loo eego tan haweenka, sidaa darteed waxaa loo qaadan karaa gebi ahaanba macho.
Xaqiiqda ah in galmada loo yareeyay galitaanka sidoo kale waxay la xiriirtaa fikradaha badankood ee ah inay dadku noqdaan kuwo isku jinsi ah. Maskaxda ku hay in galmada ay aad u dhib badan tahay oo ay jiri karaan dhaqanno galmo oo buuxa oo qanciya iyada oo aan la gelin ama aan loo digaagsan. Ficilka galmada looma dhimayo xaqiiqda guska siilka.
Furaha waxaas oo dhan waa in lagu raadsadaa ra'yiga haweenka. Waxaa jira daraasado badan oo tilmaamaya in haweenku ay doorbidaan ku dhaqanka galmada oo aan ka ahayn wax astaanta ah. Waa dhif iyo naadir in haweeneydu ku raaxeysato galmo haddii uu ragga dhex galo oo keliya. Waxay ubaahan yahiin dhaqano kale oo taxane ah si ay u awoodaan inay ku farxaan kuna raaxeystaan ​​inta lagu guda jiro ficilka galmada.
Tan ayaa la siiyay, waa lama huraan in dib loo awoodo in wax laga barto dhanka galmada dumarka iyo raga labadaba. Dadku waa inay ka feejignaadaan wakhti kasta awoodda galmada ee aadamuhu leeyahay. Galmadu kaliya maahan wax galid waxaana jira siyaabo badan oo badan oo aad ugu raaxeysan karto sariirta adigoon galin. Ilaa ay tarbiyadda noocan oo kale ah dhacdo, dad badan ayaa sii wadi doona inay u maleeyaan in galmoodku dhacayo oo keliya haddii uu jiro wax la galiyo Waxa kale oo aad muhiim u ah in wada-hadal wanaagsan lala yeesho lammaanaha si ay awood ugu yeeshaan inay ka wada hadlaan waxyaabo aan qarsoodi lahayn iyo inay ogaadaan sida labada qofba ugu raaxaystaan ​​sariirta.
Marka la soo koobo, gabi ahaanba waa iska cadahay in galmada jirto, dhexgalka nin ma aha lagama maarmaan. Galmadu aad ayey u ballaadhan tahay waxaana jira siyaabo badan oo aad ugu raaxeysan karto sariirta lammaanahaaga, in kasta oo aysan jirin wax galitaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Galmo » Jinsi ma jiri karaa haddii uusan jirin wax gelitaan?
5 buug oo ku saabsan dumarka ayaa la daabacay sanadkii ugu dambeeyay
Cunnooyinka detox-ka runti ma shaqeeyaan?